Mpanazatra - minibus - minibuses - fiara fitaterana madrid Mpanazatra - minibus - minibuses - fiara fitaterana madrid
Fiarabe mpitatitra, fiarabe mankany Madrid miaraka amin'ny mpamily handeha
Ny fiaramanidin'ny fiara fitaterana maoderina dia manana fiarovana avo lenta, tolotra maimaim-poana ary fampiononana lehibe indrindra, mba hanolorana ny mpanjifantsika ireto zavatra manaraka ireto sy ny zavatra hafa: Ny maoderina indrindra sy ny vao haingana indrindra amin'ny mpanjifantsika bus.
Sedan 3 seza
Toby fiantsenana Luxury ho an'ny fampakaram-bady, fisehoan-javatra manokana, serivisy seranan-tsambo, fitaterana mpanatanteraka
Fivorian'ny Minivan 7
Raha mila fanampiana ianao dia fifindran'ny olona vitsivitsy na vondrona kely, ity no fiara mety, miaraka amin'ny fahafahana manomboka ny seza 8
MINIVAN 7 VIP PLACES
MINISITERAN'NY MINIBUS - VIP 16 PLAZAS
Fialantsasatry ny raharaham-barotra?
Ahoana no ahafahantsika manampy? Lazao anay
Ny seza 16 minibus
Minibus miaraka amin'ny mpandeha 16
FITIAVANA MAMONJY AMIN'NY FAHAMARINANA? Aza manahy, MALAGASY
MINIBUS 25 VIP PLACES
Fiara madinika amin'ny fiara madrid, sokajy VIP eo amin'ny rantsan-tànanao
FAHASALAMANA SY FAMPANDROSOANA FIVORIANA MIARAKA AMIN'NY TOE-DRAHARAHAN'NY MINIBUS 35 RECOMMANDIARATRA HO AN'NY MEDIUM GROUPS
MICROBUS 35 - Kianjan'ny VIPN 39
FITAOVANA LEATHER, USB FOKO, WIFI, TABLES, ....
BUSES 40 PLAZAS
40 PLAZAS BUS RENTAL
Famandrihana bisy toerana 54
un bus na fandraisana bus amin'ny 54 plazas any madrid Io no iray amin'ireo safidy tena ilain'ny tarika
SAKAFO FIVORIANA MIVAVAKA 54 VIP
Comfort, Security, Elegance ... serivisy avo lenta ao amin'ny Mercedes Tourismo vaovao, miaraka amin'ny fanampiana fotsiny ho an'ny fampiononana ny mpanjifa
Ilay bibi-dia AMIN'NY A halavan'ny mihoatra noho 15 70 metatra TSY AFAKA BUS mpandeha gridlock, miaraka amin'ny fahaiza-manao eo amin'ny vatan-kazo mba hitondra entana sy ny kitapo bisikileta 30
Microbus 33 Square
Microbus 33 am-pianarana tena tsara ho an'ny seza fiara fitateram-bahoaka, na ny fitsangantsanganana, misy ny fandrosoana sy ny fiarovana farany fa ny ankizy dia azo antoka. Izany ihany koa ny fitaterana tsara indrindra mba hahazoana manodidina Madrid araka ny toerana misy fepetra ihany 33 fa 10 3,20 metatra sy avo
Fiarabe mpitatitra, fiarabe mankany Madrid miaraka amin'ny mpamily handeha Desambra 4th, 2018Fampiofanana mpampiofana